Odiyifo Elia Maa Onyankopɔn Kyekyee Ne Werɛ | Gyidi a Edi Mũ
Ɔmaa Ne Nyankopɔn Kyekyee Ne Werɛ
1, 2. Nsɛm akɛse bɛn na esisii wɔ da no mu a na Elia nhuu bi da wɔ n’asete- na mu?
BERE a esum reba no, Elia tuu mmirika faa osu a na ɛretɔ no mu. Ná ɔkwan a ɔretwa akɔ Yesreel no ware, na na wabɔ akwakoraa nso. Ne nyinaa akyi no, otuu mmirika a wammrɛ, efisɛ na “Yehowa nsa” wɔ no so. Ɛda adi sɛ, na onnyaa ahoɔden a ɔde retu mmirika saa no bi da. Ɛnkyɛe koraa na na ɔde mmirika asian mpɔnkɔ a wɔretwe teaseɛnam a Ɔhene Ahab te mu no ho!—Monkenkan 1 Ahene 18:46.
2 Afei de, na ɔkwan no mu ada hɔ ama no. Wo de, fa w’adwene bu sɛ Elia retu mmirika na ɔresiam nsu a ɛresen fa n’anim, na bere koro no ara ɔredwinnwen nsɛm akɛse a esisii wɔ da no mu a na onhuu bi da wɔ n’asetena mu no ho hwɛ. Akyinnye biara nni ho sɛ, na eyi yɛ nkonimdi kɛse ma Elia Nyankopɔn, Yehowa, ne nokware som. Ná Elia ne Bepɔw Karmel a atifi afifide nyinaa ahyew no ntam atwe koraa, na esiane osu a na ɛretɔ, mframa a ɛrefa, ne aprannaa a ɛrebobom no nti, na ɔhwɛ n’akyi a onhu bepɔw no bio. Saa bepɔw no so na Yehowa nam Elia so yɛɛ anwonwade kɛse maa Baal som anim guu ase. Ɛbɛdaa adi sɛ Baal adiyifo pii no yɛ atorofo ma enti na ɛfata sɛ wokunkum wɔn. Afei Elia bɔɔ Yehowa mpae sɛ ɔmma ɔpɛ a na asi asase no so mfe abiɛsa ne fã no mmra awiei. Na osu tɔe!—1 Ahe. 18:18-45.
3, 4. (a) Bere a na Elia rekɔ Yesreel no, ɛbɛyɛ sɛ dɛn na ɛmaa n’anidaso yɛɛ kɛse? (b) Nsɛmmisa bɛn na yebesusuw ho?
3 Bere a na Elia nam osu a ɛretɔ no mu retwa kwan bɛyɛ kilomita 30 akɔ Yesreel no, ɛbɛyɛ sɛ na wanya anidaso kɛse. Ɛbɛyɛ sɛ obenyaa anidaso sɛ ɛrenkyɛ na nneɛma asesa. Ná ɛsɛ sɛ Ahab sakra! Ɛbɛyɛ sɛ n’adwene yɛɛ no sɛ, nsɛm a na asisi wɔ Ahab anim no bɛma wagyae Baal som; wama Yesebel a ɔyɛ ɔhemmaa no agyae nea ɔreyɛ no; na wama wagyae Yehowa asomfo a ɔretaa wɔn no nso.
“Elia . . . tuu mmirika kosian Ahab ho koduu Yesreel”
4 Sɛ ɛte sɛ nea nneɛma rekɔ yiye ma yɛn a, ɛnyɛ den koraa sɛ yebenya adwene sɛ nneɛma bɛyɛ yiye. Ebia yɛn adwene bɛyɛ yɛn sɛ nneɛma bɛkɔ so prɔmprɔm, na ebi mpo a yɛasusuw sɛ yɛn haw nyinaa aba awiei. Sɛ Elia nyaa adwene a ɛte saa a, ɛnyɛ nwonwa, efisɛ na ɔyɛ “onipa a ɔwɔ nkate te sɛ yɛn ara.” (Yak. 5:17) Nanso, nokwasɛm ne sɛ, na Elia bɛkɔ so ahyia ɔhaw ahorow pii. Nokwarem no, na ɛrenkyɛ koraa na ehu kɛse aka Elia ma n’abam abu kɛse, na ne yam a na anka wawu. Dɛn na esii, na dɛn na Yehowa yɛe de boaa ne diyifo no maa ne gyidi mu kɔɔ so yɛɛ den na ɔsan nyaa akokoduru? Momma yɛnhwɛ.
Nsɛm Bi a Wɔnhwɛ Kwan Sisii
5. So nsɛm a esisii wɔ Bepɔw Karmel so no maa Ahab behui sɛ ɛsɛ sɛ onya obu kɛse ma Yehowa, na yɛyɛ dɛn hu?
5 Bere a Ahab duu n’ahemfie wɔ Yesreel no, so ɔyɛɛ biribi a na ɛkyerɛ sɛ wasakra? Yɛkenkan sɛ: “Ahab kaa nea Elia ayɛ nyinaa ne sɛnea ɔde nkrante akunkum adiyifo no nyinaa kyerɛɛ Yesebel.” (1 Ahe. 19:1) Hyɛ no nsow sɛ, bere a Ahab reka nea esisii wɔ ɛda no mu ho asɛm no, wammɔ Elia Nyankopɔn, Yehowa, din. Esiane sɛ na Ahab kura nnipa adwene wɔ nneɛma ho nti, n’adwene nyinaa yɛɛ no sɛ anwonwade a esisii no fi onipa. Ɔkae sɛ: “Nea Elia ayɛ.” Ɛda adi sɛ na Ahab nhui sɛ ɛsɛ sɛ onya obu ma Yehowa Nyankopɔn. Na dɛn na ne yere Yesebel a ɔyɛ ɔweredifo no yɛe?
6. Nkra bɛn na Yesebel de kɔmaa Elia, na na ɛkyerɛ dɛn?
6 Yesebel bo fuwii paa! Esiane sɛ na ne bo afuw paa nti, ɔsoma ma wɔde asɛm yi kɔmaa Elia sɛ: “Sɛ ebedu ɔkyena sesɛɛ na memmaa wo kra nyɛɛ sɛ wɔn mu biako kra a, anyame no ntua me ka na wɔmfa bi nka ho!” (1 Ahe. 19:2) Ná ka a Yesebel kae sɛ obekum Elia no nyɛ anosɛm kɛkɛ. Nea na ɔreka ara ne sɛ, sɛ ade bɛkye na ontumi mmaa wonkum Elia mfa ntuaa no ka wɔ nea na wayɛ atia Baal adiyifo no ho a, ɛnde ɔde n’ankasa nkwa betwa so. Wo de, hwɛ sɛ Elia ada wɔ ɔdan ketewa bi mu wɔ Yesreel, na ɔhemmaa no somafo akonyan no saa anadwo a na osuframa bi rebɔ no, na ɔde nkra a etu koma saa rema no. Asɛm no kaa Elia dɛn?
Abasamtu ne Ehu Hyɛɛ no So
7. Kum a Yesebel kae sɛ obekum Elia no kaa no dɛn, na dɛn na ɔyɛe?
7 Sɛ na Elia adwene yɛ no sɛ Baal som a otuu so sa no aba awiei a, ɛnde anidaso a onyae saa bere no nyinaa yɛɛ kwa. Nea na asi no ampusuw Yesebel koraa. Ná Yesebel ama wɔakunkum adiyifo foforo pii dedaw, na afei de, na ɛte sɛ Elia na na adu no so. Kum a Yesebel kae sɛ obekum Elia no kaa no dɛn? Bible ka sɛ: “Ehu kaa no.” So Elia fii ase de n’adwene twaa sɛnea na Yesebel bekum no yayaayaw no ho mfonini? Sɛ odwinnwen ho saa a, ɛnde na ɛnyɛ nwonwa sɛ ehu kaa no. Sɛnea ɛte biara no, Elia “guan de peree ne kra,” kyerɛ sɛ, oguan de peree ne nkwa.—1 Ahe. 18:4; 19:3.
Sɛ yɛpɛ sɛ yɛkɔ so nya akokoduru a, ɛnsɛ sɛ yɛde yɛn adwene si nneɛma a ɛbɛma ehu aka yɛn so
8. (a) Ɔkwan bɛn so na na ɔhaw a Petro wɔ no te sɛ Elia de no? (b) Dɛn na yebetumi asua afi Elia ne Petro asɛm no mu?
8 Ɛnyɛ Elia nkutoo ne ɔbarima a ɔwɔ gyidi a ɔmaa ehu kaa no. Mfe pii akyi no, ɔsomafo Petro nso maa ehu kaa no saa ara. Sɛ nhwɛso no, bere a Yesu maa Petro bɛkaa no ho ma wɔnantew nsu so no, ɔsomafo no fii ase ‘huu sɛnea mframa no rebɔ no.’ Afei ehu kaa no na ofii ase sɛ ɔremem. (Monkenkan Mateo 14:30.) Enti Elia ne Petro asɛm yi ma yenya asuade titiriw bi. Sɛ yɛpɛ sɛ yɛkɔ so nya akokoduru a, ɛnsɛ sɛ yɛde yɛn adwene si nneɛma a ɛbɛma ehu aka yɛn so. Ɛsɛ sɛ yɛkɔ so de yɛn adwene si Onii a ɔma yenya anidaso ne akokoduru no so.
“Afei De, Mabrɛ!”
9. Ka ɔkwan a Elia twae ne sɛnea ɛbɛyɛ sɛ na ɔte nka bere a na ɔreguan no ho asɛm.
9 Ehu kaa Elia ma ɔde n’ani kyerɛɛ anafo fam atɔe twaa kwan bɛyɛ kilomita 150 kɔɔ Beer-Seba, kurow a ɛbɛn Yuda anafo fam hye so no. Oduu kurow no mu no, ogyaw n’abofra no wɔ hɔ, na ɔno nkutoo kɔɔ sare no so. Kyerɛwnsɛm no ka sɛ ‘otwaa da koro kwan.’ Enti yetumi hu sɛ ofii n’akwantu no ase anɔpa, na ɛda adi sɛ wamfa aduan anaa nneɛma foforo biara. Wo de, hwɛ sɛ n’abam abu, na ehu nti ɔde animia nam awia kataban so wɔ wuram kwan a ɛso yɛ mmonkyimmɔnka no so. Bere a owia no de nkakrankakra rekɔtɔ na ade resa no, afei de na Elia ayɛ mmerɛw. Esiane sɛ na wabrɛ nti, ɔtenaa sisia dua bi ase. Wɔ saa akwayow no so no, na ɛno nkutoo ne ade a ɛbɛn no a obenya onwini wɔ ase.—1 Ahe. 19:4.
10, 11. (a) Dɛn na mpae a Elia bɔɔ Yehowa no ma yehu? (b) Fa kyerɛw nsɛm a wɔatwe adwene asi so no mu nsɛm kyerɛkyerɛ sɛnea Onyankopɔn asomfo binom abam bui mu.
10 Elia bɔɔ mpae wɔ ahoyeraw mu. Ɔsrɛe sɛ onwu. Ɔkae sɛ: “Minye mensen m’agyanom.” Saa bere no, na onim sɛ n’agyanom adan dɔte ne nnompe wɔ wɔn adamoa mu, na wɔrentumi nyɛ adepa biara mma ateasefo. (Ɔsɛnk. 9:10) Elia tee nka sɛ mfaso biara nni no so. Enti ɛnyɛ nwonwa sɛ ɔkae sɛ: “Afei de, mabrɛ!” Ná onhu nea enti a ɛsɛ sɛ ɔkɔ so tena nkwa mu.
11 Sɛ yehu sɛ Onyankopɔn nipa bi abam abu ma ɔyɛ ne ho hwee a ɛnyɛ yiye a, so ɛsɛ sɛ ɛyɛ yɛn nwonwa? Dabi. Wɔaka mmarima ne mmea anokwafo bi ho asɛm wɔ Bible mu sɛ wɔn werɛ howee araa ma wonyae a na anka wɔawu. Wɔn mu bi ne Rebeka, Yakob, Mose, ne Hiob.—Gen. 25:22; 37:35; Num. 11:13-15; Hiob 14:13.
12. Sɛ ɛba sɛ w’abam bu a, dɛn na ɛsɛ sɛ woyɛ de suasua Elia?
12 Ɛnnɛ, yɛte “mmere a emu yɛ den” mu, enti ɛnyɛ nwonwa sɛ ɛtɔ mmere bi a nnipa pii a Onyankopɔn asomfo anokwafo mpo ka ho abam bu. (2 Tim. 3:1) Sɛ ɛba sɛ w’abam bu saa a, suasua nea Elia yɛe no: Bɔ mpae na ka wo komam asɛm kyerɛ Onyankopɔn. Nea ɛte ne sɛ, Yehowa yɛ “awerɛkyekye nyinaa Nyankopɔn.” (Monkenkan 2 Korintofo 1:3, 4.) So ɔkyekyee Elia werɛ?
Yehowa Boaa Ne Diyifo No
13, 14. (a) Dɛn na Yehowa nam ɔbɔfo bi so yɛe a ɛkyerɛ sɛ odwen ne diyifo a na n’abam abu no ho? (b) Dɛn nti na ɛyɛ awerɛkyekye sɛ Yehowa nim yɛn mu biara yiye, na mpo onim nea yebetumi ayɛ?
13 Wususuw sɛ bere a Yehowa wɔ soro na ɔhwɛɛ asase so na ohui sɛ ne diyifo a ɔdɔ no no da saa dua no ase wɔ sare no so resrɛ sɛ owu mmɛfa no no, ɔtee nka dɛn? Ɛnsɛ sɛ yɛbɔ yɛn srɛ mu ka biribi. Bere a Elia dae no, Yehowa somaa ɔbɔfo bi baa ne nkyɛn. Ɔbɔfo no de ne nsa kaa no bɔkɔɔ, na ɔkae sɛ: “Sɔre didi.” Elia sɔre didii, efisɛ na ɔbɔfo no asiesie aduan kakra—paanoo a ɛyɛ hyew ne nsu—abrɛ no. So ɔdaa ɔbɔfo no ase mpo? Nea Kyerɛwnsɛm no ka ara ne sɛ odiyifo no didi nomee, na ɔsan kɔdae. So n’abam na na abu araa ma enti wantumi ankasa? Sɛnea ɛte biara no, ɔbɔfo no san nyanee no ne mprenu so, ebia ahemadakye. Saa bere yi nso, ɔka kyerɛɛ Elia sɛ “Sɔre didi,” na ɔde asɛm a ɛho hia yi kaa ho sɛ, “akwantu no boro w’ahoɔden so.”—1 Ahe. 19:5-7.
14 Esiane nhumu a na Onyankopɔn ama ɔbɔfo no anya nti, na onim baabi a Elia rekɔ. Ná onim nso sɛ, ɔkwan no boro Elia so sɛ ɔde n’ankasa ahoɔden betwa. Hwɛ sɛnea ɛyɛ awerɛkyekye sɛ yɛsom Onyankopɔn a onim yɛn botae ne nea yebetumi ayɛ sen sɛnea yɛn ankasa yenim mpo! (Monkenkan Dwom 103:13, 14.) Ɔkwan bɛn so na saa aduan no boaa Elia?
15, 16. (a) Dɛn na aduan a Yehowa de maa Elia no ma otumi yɛe? (b) Dɛn nti na ɛsɛ sɛ Yehowa asomfo a wɔwɔ hɔ nnɛ kyerɛ ɔkwan a ɔfa so boa wɔn no ho anisɔ?
15 Yɛkenkan sɛ: “Ɔsɔre didi nomee, na ɔde ahoɔden a onya fii aduan no mu twaa kwan adaduanan, awia ne anadwo; ɔkɔe ara koduu nokware Nyankopɔn bepɔw, Horeb so.” (1 Ahe. 19:8) Sɛnea Mose a ɔtenaa ase mfe 600 ansa na Elia reba ne Yesu a ɔno nso tenaa ase bɛyɛ mfe 1,000 wɔ Elia akyi no annidi awia ne anadwo nnafua 40 no, saa ara na Elia nso yɛe. (Ex. 34:28; Luka 4:1, 2) Saa aduan biako no anyi Elia haw nyinaa amfi hɔ, nanso ɛboaa no anwonwakwan so. Hwɛ sɛ akwakoraa yi abrɛ na ɛyɛ den ma no mpo sɛ obetu ne nan wɔ sare a ɔkwantempɔn anaa anammɔnkwan biara nna so no so, na ɔnam awia ne anadwo saa ara nnafua 40!
16 Ɛnnɛ nso, Yehowa boa n’asomfo saa ara; ɛnyɛ honam fam aduan na ɔde ma wɔn anwonwakwan so, nanso nea ɔde ma wɔn no kyɛn saa koraa. Ɔma n’asomfo honhom fam aduan. (Mat. 4:4) Onyankopɔn ho ade a yesua fi n’Asɛm ne nhoma ahorow a wɔayɛ a egyina Bible so mu no boa yɛn ma yɛkɔ so som no. Sɛ yesua Onyankopɔn ho asɛm saa a, ɛrenyi yɛn haw nyinaa mfi hɔ de, nanso ebetumi aboa yɛn ma yɛagyina nea anka yɛrentumi nyɛ ho hwee no ano. Ɛbɛsan nso aboa yɛn ma yɛanya “daa nkwa.”—Yoh. 17:3.
17. Ɛhe na Elia kɔe, na dɛn nti na na ɛhɔ yɛ beae titiriw?
17 Elia twaa kwan bɛyɛ kilomita 320 kosii sɛ oduu Bepɔw Horeb so. Ná bepɔw no so yɛ beae titiriw paa efisɛ ɛhɔ na bere bi a atwam no Yehowa Nyankopɔn nam ɔbɔfo bi so yii ne ho adi kyerɛɛ Mose wɔ nkyɛkyerɛ bi a na ɛredɛw mu, na ɛhɔ ara nso na akyiri yi, Yehowa ne Israelfo yɛɛ Mmara apam no. Bere a Elia duu hɔ no, onyaa ɔbodan bi mu kɔdae.
Sɛnea Yehowa Kyekyee Ne Diyifo no Werɛ na Ɔhyɛɛ no Den
18, 19. (a) Asɛm bɛn na Yehowa bɔfo no bisaa Elia, na mmuae bɛn na ɔde maa no? (b) Nneɛma abiɛsa bɛn na Elia kyerɛe sɛ ɛmaa n’abam bui?
18 Bere a Elia duu Horeb no, ɛda adi sɛ Yehowa nam ɔbɔfo bi so de ‘n’asɛm’ maa no. Asɛm tiawa a obisaa no ne sɛ: “Elia, dɛn na woreyɛ wɔ ha?” Ɛbɛyɛ sɛ obisaa no bɔkɔɔ, efisɛ Elia faa no sɛ ɛyɛ hokwan na ɔde ama no sɛ ɔnka nea ɛwɔ ne komam nyinaa. Na ɔkaa nea ɛwɔ ne komam ankasa! Ɔkae sɛ: “Ninkunu na matwe ama asafo Nyankopɔn Yehowa, efisɛ Israelfo agyaw w’apam, w’afɔremuka nso, wɔadwiriw agu, wɔde nkrante akunkum w’adiyifo, na me nko na maka; na wɔrehwehwɛ me kra ayi afi hɔ.” (1 Ahe. 19:9, 10) Anyɛ yiye koraa no, asɛm a Elia kae no ma yehu nneɛma abiɛsa a na ama n’abam abu no.
19 Nea edi kan, na Elia te nka sɛ wabrɛ agu. Ɛmfa ho mfe pii a na Elia de ‘atwe ninkunu’ wɔ Yehowa som ho, na ɔde Onyankopɔn din kronkron ne ne som adi kan wɔ biribiara mu no, ohui sɛ sɛe ara na tebea no resɛe. Ná nkurɔfo no da so ara yɛ nnipa a wonni gyidi ne atuatewfo, na trɛw ara na na atoro som nso mu retrɛw. Nea ɛto so abien, na Elia te nka sɛ aka ɔno nkutoo. Ɔkae sɛ: “Me nko na maka,” te sɛ nea ɔno nko ara ne onipa a ɔwɔ ɔman no mu a na ɔda so ara resom Yehowa. Nea ɛto so abiɛsa, na ehu aka Elia. Ná wɔakunkum ne mfɛfo adiyifo no pii dedaw, na na ogye di sɛ ɔno na adu no so. Ɛbɛyɛ sɛ na ɛyɛ den ma Elia sɛ obegye atom sɛ saa na ɔte nka, nanso ɔkaa nea ɛhaw no no kyerɛɛ Onyankopɔn a wamma ahantan ne fɛre ansiw no kwan. Ɔnam ne komam asɛm a ɔka kyerɛɛ Onyankopɔn wɔ mpaebɔ mu no so yɛɛ nhwɛso pa maa Yehowa asomfo anokwafo nyinaa.—Dw. 62:8.
20, 21. (a) Ka nea Elia hui bere a na ogyina ɔbodan no ano wɔ Bepɔw Horeb so no ho asɛm. (b) Dɛn na sɛnea Yehowa daa ne tumi adi no maa Elia hui?
20 Dɛn na Yehowa yɛe de boaa Elia wɔ ehu a na aka no ne nneɛma a na ɛhaw no no ho? Ɔbɔfo no ka kyerɛɛ Elia sɛ ommegyina ɔbodan no ano. Ɔyɛɛ saa a na onnim nea na ɛrebobɔ ba. Mframa kɛse bi bɔe! Ɛbɛyɛ sɛ ɛyɛɛ dede paa, efisɛ na ano yɛ den araa ma ɛpaapaee mmepɔw ne abotan mu. Wo de, twa Elia ho mfonini sɛ ɔde ne nsa asiw n’anim na bere koro no ara okura aboa nhwi atade yuu a emu yɛ duru no mu na mframa rebɔ kyekyere ne ho no hwɛ. Afei na ɛsɛ sɛ ɔbɔ mmɔden sɛ obegyina ne nan so yiye efisɛ na asase a ogyina so no rewosow biribiri—asasewosow sii ɔmantam no mu! N’ani so antetew no koraa na ogya kɛse bi bɔ faa hɔ ma ɔsan kɔhyɛɛ ɔbodan no mu sɛnea ɛbɛyɛ a ɔhyew a ano yɛ den no renka no.—1 Ahe. 19:11, 12.
Yehowa de ne tumi kɛse no kyekyee Elia werɛ, na ɔhyɛɛ no den
21 Kyerɛwnsɛm no ka sɛ na Yehowa nni mframa a ɛbɔe, asase a ɛwosowee, anaa ogya a ɛbɔ faa hɔ no mu biara mu. Ná Elia nim sɛ Yehowa nyɛ atoro nyame bi te sɛ Baal a na n’asomfo a wadaadaa wɔn no kamfo no sɛ “ɔte omununkum so,” anaasɛ ɔma osu tɔ no. Yehowa ne Onii a tumi a ɛwɔ amansan yi mu nyinaa fi no, na ɔsan nso wɔ tumi koraa sen biribiara a wabɔ. Ɔsoro mpo ntumi nkora no! (1 Ahe. 8:27) Ɔkwan bɛn so na eyinom nyinaa boaa Elia? Kae sɛ, na ehu aka no. Enti sɛ na Onyankopɔn a ɔne Yehowa, Onyankopɔn a ɔyɛ tumi nyinaa Wura no wɔ Elia afã a, ɛnde dɛn na na Ahab ne Yesebel betumi de ayɛ no?—Monkenkan Dwom 118:6.
22. (a) Ɔkwan bɛn so na ‘ɛnne bi a ɛwɔ fam a ɛkasa kyerɛɛ Elia bɔkɔɔ’ no ma ɔsan nyaa awerɛhyem sɛ ɔsom bo? (b) Ɛbɛyɛ sɛ hena na saa ‘ɛnne a ɛwɔ fam a ɛkasae bɔkɔɔ’ no fi no? (Hwɛ ase hɔ asɛm no.)
22 Bere a ogya no twaam no, ɛhɔ yɛɛ dinn, na Elia tee sɛ ‘ɛnne bi a ɛwɔ fam rekasa bɔkɔɔ.’ Ɛmaa Elia san kasae bio, na ɔkaa nneɛma a ɛhaw no no ne mprenu so. * Ɛbɛyɛ sɛ saa asɛm a ɔkae no maa ne koma tɔɔ ne yam kɛse. Nanso, akyinnye biara nni ho sɛ, asɛm a edi hɔ a saa ‘ɛnne a ɛwɔ fam a ɛkasa kyerɛɛ Elia bɔkɔɔ’ no kae no kyekyee ne werɛ paa. Yehowa san maa Elia awerɛhyem sɛ ɔyɛ ne somfo a ɔsom bo paa. Ɔkwan bɛn so? Onyankopɔn maa Elia huu ɔko a na ɔde reba Baal som so wɔ Israel no ho nsɛm pii. Ɛda adi sɛ, na Elia mmrɛ ngui, efisɛ na Onyankopɔn rebɛyɛ biribi atia Baal som. Bio nso, na Elia bedi akoten wɔ saa ɔko no mu efisɛ Yehowa de akwankyerɛ pɔtee bi maa no sɛ ɔnsan nsim nkɔyɛ ho adwuma.—1 Ahe. 19:12-17.
23. Bere a Elia tee nka sɛ aka ne nkutoo no, nneɛma abien bɛn na Yehowa yɛe de boaa no?
23 Na sɛnea na Elia te nka sɛ aka ne nkutoo no nso ɛ? Yehowa yɛɛ nneɛma abien de boaa no. Nea edi kan, ɔka kyerɛɛ Elia sɛ ɔnsra Elisa sɛ odiyifo a obesi n’ananmu daakye. Ná aberante yi bɛka Elia ho na wayɛ ne boafo mfe pii. Hwɛ awerɛkyekye ara a na eyi bɛma wanya! Nea ɛto so abien, Yehowa kaa anigyesɛm a edi so yi kyerɛɛ no sɛ: “Mama nnipa mpemnson aka Israel a wommuu nkotodwe nkotow Baal, na wɔmfew n’ano.” (1 Ahe. 19:18) Sɛɛ na ɛnkaa Elia nkutoo. Ɛbɛyɛ sɛ n’ani gyei sɛ ɔtee sɛ saa anokwafo mpempem pii no nnya nsomee Baal. Ná saa nkurɔfo no pɛ sɛ Elia kɔ so de nokwaredi yɛ ne som adwuma no de yɛ nhwɛso ma wɔn a na wɔagyina pintinn redi nokware ma Yehowa wɔ saa mmere bɔne no mu no. Ɛbɛyɛ sɛ bere a Elia Nyankopɔn, Yehowa, nam ne bɔfo no so de ‘ɛnne a ɛwɔ fam kasae bɔkɔɔ’ kyerɛɛ no no, ɛhyɛɛ no nkuran paa.
Wɔ ɔkwan bi so no, sɛ yɛma Bible kyerɛ yɛn kwan a, ebetumi ayɛ te sɛ ‘ɛnne bi a ɛwɔ fam a ɛkasa bɔkɔɔ’ kyerɛ yɛn nnɛ
24, 25. (a) Ɔkwan bɛn so na yebetumi atie Yehowa ‘nne a ɛwɔ fam a ɛkasa bɔkɔɔ’ no nnɛ? (b) Yɛyɛ dɛn tumi hu sɛ Elia gyee awerɛkyekyesɛm a Yehowa de maa no no toom?
24 Sɛ yehu nneɛma akɛse a ɛyɛ nwonwa wɔ abɔde mu no a, ebia yɛn ho bedwiriw yɛn paa te sɛ Elia. Nneɛma a Ɔbɔadeɛ no ayɛ no ma yehu ne tumi pefee. (Rom. 1:20) Yehowa ani da so gye ho sɛ ɔde ne tumi a enni ano no bɛboa n’asomfo anokwafo. (2 Be. 16:9) Nanso, nea Onyankopɔn nam so kasa kyerɛ yɛn paa ne n’Asɛm Bible no. (Monkenkan Yesaia 30:21.) Wɔ ɔkwan bi so no, sɛ yɛma Bible kyerɛ yɛn kwan a, ebetumi ayɛ te sɛ ‘ɛnne bi a ɛwɔ fam a ɛkasa bɔkɔɔ’ kyerɛ yɛn nnɛ. Yehowa nam emu nsɛm a ɛka koma no so teɛ yɛn so, hyɛ yɛn nkuran, na ɔma yɛn awerɛhyem sɛ ɔdɔ yɛn.
25 So Elia gyee awerɛkyekyesɛm a Yehowa de maa no wɔ Bepɔw Horeb so no toom? Akyinnye biara nni ho sɛ, ɔyɛɛ saa! Ankyɛ koraa na ɔsan gyinaa ne nan so bio sɛ odiyifo nokwafo a ɔde akokoduru kasa tia atoro som. Sɛ yɛn nso yetie Onyankopɔn asɛm a wɔde ne honhom kyerɛwee, “Kyerɛwnsɛm no mu awerɛkyekye” no a, yebetumi asuasua Elia gyidi no.—Rom. 15:4.
^ nky. 22 Ɛbɛyɛ sɛ honhom abɔde a wɔde “Yehowa asɛm” a ɛwɔ 1 Ahene 19:9 no somaa no no ara na saa ‘ɛnne a ɛwɔ fam a ɛkasae bɔkɔɔ’ no fi no. Wɔka honhom abɔde yi ho asɛm tiawa wɔ 1 Ahene 19:15 sɛ, ɛyɛ “Yehowa.” Ebia yɛbɛkae ɔbɔfo a Yehowa ma odii Israelfo no anim wɔ sare no so ne nea Onyankopɔn kaa no ho asɛm sɛ: “Me din da no so” no. (Ex. 23:21) Nokwarem no, yɛrentumi nsi no pi nka sɛ ɔbɔfo yi yɛ Yesu, nanso ɛsɛ sɛ yɛhyɛ no nsow sɛ ansa na Yesu reba asase so no na ɔno ne “Asɛm no,” Ɔkasamafo titiriw ma Yehowa asomfo no.—Yoh. 1:1.
Nsɛm a esisii bɛn na ɛmaa Elia abam bui?
Tebea ahorow bɛn na ɛmaa Elia abam bui?
Nneɛma bɛn na Yehowa yɛe de kyekyee Elia werɛ?
Sɛ ɛba sɛ w’abam bu a, dɛn na wobɛyɛ de asuasua Elia?
Elia Maa Ne Nyankopɔn Kyekyee Ne Werɛ